Niverina ny fizahantany Tonizia: mpitsidika 8.3 tapitrisa mandany $ 1.4 miliara
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Niverina ny fizahantany Tonizia: mpitsidika 8.3 tapitrisa mandany $ 1.4 miliara
Tian'ireo mpivahiny eropeana i Tonizia, ary hita izany. Na eo aza ny fampandrenesana fitsangatsanganana ataon'ny Etazonia dia mandeha any Tonizia indray ny eropeana. Ny tapakila fizahantany Tunis dia tafakatra hatramin'ny 1.4 miliara dolara tany Tonizia hatramin'ny Janoary hatramin'ny 20 Desambra 2018, araka ny isa nomen'ny Ministeran'ny Fizahan-tany sy ny asa-tanana ho an'ny masoivohom-baovao Tunis Afrique Presse (TAP). Ny sanda dia mitovy amin'ny 3.9 miliara dinara (1.4 miliara dolara) ary naneho fitomboana 42.1% tamin'ny vanim-potoana nitovy tamin'ny 2017.
Raha ny filazan'ny TAP, ny taona 2018 dia nanjary ny tsara indrindra tao anatin'ny folo taona farany ho an'ny fizahantany tany Tonizia. Tamin'ny 31 desambra, nahazo mpitsidika 8.3 tapitrisa ny firenena, fitomboana 17.7% noho ny 2017.
Ny frantsay no voalohany, narahin'ny Alzeriana. Maghreb dia ny faritra afrikanina manangona an'i Libya, Tonizia, Algeria, Morocco, ary Mauritania.
Mikasika ny fijanonana mandritra ny alina any amin'ny hotely, ny faritra malaza indrindra dia ny Djerba-Zarsis Sousse, Nabeul-Hammamet, Monastir-Skanes, Yasmine Hammamet ary Tunis-Carthage Coasts.
Koh Samui any Thailand dia vonona handray orinasa indray aorian'ny Tropical Storm Pabuk